Ataon’ny Serba mpisera aterineto fanalana hamohamo ny fandisoam-baovaon’ny mpanohana ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2018 10:25 GMT
Pika avy amin'ny lahatsarin'ny tatitra mitongilana ataon'ny fampitam-baovaom-panjakana serba milaza fa vitsy ny manatrika ny fihetsiketsehana ampifanandrifiana amin'ny zavamisy marina momba ny fihetsiketsehana. Etsy ambany ny lahatsary.
Olom-pirenena serba an'arivony no nidina an-dalamben'i Belgrade tao anaty orana tamin'ny 8 desambra, mitaky ny hampitsaharana ny herisetra tohanan'ny fanjakana amin'ireo mpitarika ny fanoherana ara-politika sy hamaranana ny “akanjo mihoson-dra.”
Nokarakarain'ny antoko politika mpanohitra ny fihetsiketsehana ho setrin'ny fanafihana nahazo ny mpitarika iray ao amin'ny fanoherana Borko Stefanović, izay nampiseho akanjo mihosin-dra nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, izay niteraka endrika famoretana vaovao.
Saingy rikoriko ny rafitra fampitambaovao voafehy mafy ao Serbia hankatoa izao endrika fanehoana tsy fahafaliam-bahoaka manan-danja izao. Nandritra ny ora sy andro nanaraka ny fihetsiketsehana, mijery ny fandisoam-baovao ataon'ny fampahalalam-baovao ao antoerana amin'ny halalina sy velaran'ny hetsi-panoherana ny Serba mpiserasera aterineto sy manampahaizana manokana amin'ny fampitam-baovao. Ireny tatitra mivilana ireny avy eo no miteraka fironam-pihetsika malaza vetivety ao amin'ny media sosialy.
Araka ny tatitry ny N1 Tv, Voice of America ary ny Reuters, Mihiakiaka sy misiotsioka ireo mpanao fihetsiketsehana miampanga ny antokon'ny mpitondra, Antoko Liam-pandrosoana Serba (SNS) amin'ny famelana ny isian'ny herisetra mihatra amin'ny mpanohitra ara-politika, ary mihiaka hoe “Mivoaha” sy ny “tsy ho tafavoaka amin'io izany ianareo.” Nikabary ireo olona fanta-bahoaka, anisan'izay ny mpiantsehatra sady malala-tanana Sergej Trifunović. Ny voamarika dia tsy nampiseho endrika sy sary famantarana antoko politika ireo mpanao fihetsiketsehana ireo.
Tafiditra ao anatin'ny hetsika tsy manao herisetra ny diabe manavatsava ny afovoan-tanànan'i Belgrade mankany amin'ny Parlemanta ary avy eo mankany amin'ny fampielezam-peo sy sarim-pirenena Radio Televizionan'i Serbia (RTS).
Eh! ry vaovaon'i RTS a! misy olona roa alina eto anoloan'ny tranonareo. Hanamarika ireo ve ianareo amin'ny vaovao takariva laharana faharoa izay hanomboka afaka 15 minitra?
Raha sady tsy hitanareo no tsy renareo ireo dia ataovy afaka ny tenanareo hijery azy ireo amin'ny varavarankely.
Tongavantsoa ianareo amin'ny fotoana rehetra!
Ny vaovao lehibe tao amin'ny vaovaon'i RTS dia ny fihetsiketsehan'ny “gilets jaunes” (mpiakanjo mavo) ao Frantsa sy ny fitsidihan'ny mpihira Ceca tao Kosovo. Nomarihana fohy tao amin'ny faha-23 minitra tamin'ny vaovao takariva fotsiny ny fihetsiketseham-panoherana tao Belgrade.
Nilaza ireo mpikarakara fa betsaka noho ny nantenaina ireo tonga, ary nanombana fa manodidina ny 15.000 ny isan'ny olona nandray anjara. Saingy nampitandrina ny maro fa tsy nahatratra ny vahoaka amin'ny ankapobeny tao Serbia ny vaovaon'ny zava-nitranga, satria fehezin'ny governemanta SNS ny ankamaroan'ny fampitam-baovao ao amin'ny firenena.
Niara-nandeha nankany amin'ny hetsika izahay ary niara-nody tamin'ny fampiasana Car-go [servisy mitovy amin'ny Uber]. Tsy misy tamin'ireo mpamily no nihevitra fa nisy fihetsiketsehana rahalina. Ary tsy mpankasitraka na mpikambana ao amin'ny mafian-kisoa ireo mpamily ireo. Tamin'ny taona 1996, farafahakeliny fantsona roa no nampahafantatra lanonana toy izany, ny b92 sy ny Studio B. Ankehitriny median'ny fasista no misy. Aiza ary no ahitan'ny vahoaka vaovao? Eo ampiheverana izany dia [betsaka tokoa ny olona tonga tao] tamin'ny alina.
Taorian'ny fihetsiketsehana, namoaka resaka fohy ny Studio B TV ka tao no nanamaivanan'ny mpitati-baovao ny fihetsiketseham-panoherana. Lasa lohahevitra mangotraka tao amin'ny media sosialy serba ny toe-draharaha. tao amin'ny clip, nilaza nympitati-baovao Barbara Životić fa olona vitsy dia vitsy no nanatrika ny hetsi-panoherana ary nosoritsoritany ho mpihatsaravelatsihy sy mpampiroborobo herisetra ny mpanomana.
Tao amin'ny tatitra izy nilaza:
Lazaina ho hetsik'olompirenena mpandala fandriampahalemana manohitra ny herisetra izy ity. Mazava loatra fa ao ambadik'ity hetsi-panoherana ity ny lehiben'ny fitantanam-bola sady mitarika ao amin'ny fanoherana Dragan Djilas, izay niantoka ara-bola ity hetsi-panoherana ity sady nanomana azy, mbahamoriana ny lazaina ho olona tsy mitongilana mba hahazoana olompirenena betsaka kokoa. Nanakana ny fifamoivoizana ny hetsi-panoherana. Olona vitsy dia vitsy no nandray anjara tamin'ny fihetsiketseham-panoherana. Araka ny efa nolazain'ny mpanangom-baovaonay taloha, ratsy kokoa ny fikarakarana.
Araka ny efa nolazaiko dia nomanina ity hetsi-panoherana ity hanoherana ny herisetra, tamin'ny teny faneva hoe “Atsaharo ny akanjo mihosin-dra,” izay fihatsarambelatsihy tanteraka, satria ireo olona nanomana ity fihetsiketseham-panoherana ity dia ireo niantso fitsaram-bahoaka, fanolanana, herisetra ary fanonganam-panjakana… Ary tena fihatsarambelatsihy tanteraka iazny. Indirndra amin'izao toe-draharaha ilàn'ny fanjakana fandriampahalemana sy fahamarinan-toerana izao, noho ny fivoaran-draharaha rehetra ao Kosovo sy Metohija. Mazava loatra fa nanapa-kevitra hanomana fihetsiketseham-panoherana ry zareo amin'izao fotoana izao!
Namoahan'ny tranonkalam-piadiana amin'ny vaovao faikany antsoina hoe Raskrikavanje fanamarinana ny zavamisy eny an-toerana io tati-baovao io, ka nomarihany ho fanodikodinan-tsaina avy amin'ny media. Nomarihan-dry zaeo fa mifanohitra amin'ny lahatsary azo jerena avy amin'ny diabe sy ny tatitra ofisialy avy amin'ny polisy, Nolazain-dRtoakely Životić fa nisy herisetra ny famoriam-bahoaka, ary avy eo izy nanitsakitsaka ny Lalànan'ny mpanao gazety ao Serbia tamin'ny famariparitana ireo mpandray anjara tao anatin'ny fitongilanana, milaza fa “vitsy dia vitsy ny olona nanatrika ny hetsi-panoherana”, ary avy eo nanao filazana tsy mari-pototra amin'ny filazana fa loharanom-baovao avy amin'olona tsy nitonona anarana.
Nampifanandrifian'ny artista nomerika Bojan Dzodan ny lahatsary avy ao amin'ny tatitry ny Studio B sy ny lahatsary tena nisy avy tao amin'ny hetsi-panoherana, mampiseho mpanao fihetsiketsehana an'arivony eo amin'ny toerana iray. Nalaza haingana dia haingana ny loahatsary nivoaka avy eo.
Tao anatin'ny indray andro monja, ny endrika Facebook amin'ny lahatsary dia nahazo fizarana mihoatra ny in-5800 sy jery mihoatra ny 633.000. Nanoratra izy:
Tsy raharahako velively izay mitantana ny governemanta, fa raha mbola tahaka izao ny fampitam-baovaontsika, dia hahita ahy any amin'ny fihetsiketsehana ianareo.
Miaraka amin'ny fizaràna ny lahatsarin'ny vaovao mampiady hevitra, nisy ireo mpisera media sosialy sasantsasany nanjary nirona tamin'ny fahaiza-mamorona. Mpisera iray nanoratra sy namoaka rap ôrizinaly momba ny toe-draharaha.
Tao amin'ny setriny ofisialy tokana manoloana ny fihetsiketsehana avy amin'ny manampahefana ambony ao amin'ny government, nanambara ny filoha serba Aleksandar Vučić, izay voampanga ho mirona kokoa any amin'ny fitondran'olontokana: “Manaova biabe betsaka araka izay tianareo fa tsy hanome fahafaham-po amin'ny fitakianareo aho.”